Ahoana no fomba hanehoako fampiroboroboana? - Easy Multi Display - Digital Signage
Noforonina On Enga anie 3, 2021
6. Torohevitra sy tetika
Azo atao ny mampiseho ny fampiroboroboanao amin'ny rindrambaiko Easy Multi Display. Azavainay ny fomba samihafa hanaovana azy.
Mampiasa Google Slides
Afaka mampiasa Google ianao tsary (lamba,Docs,teny) mba hampisehoana ny fampiroboroboanao amin'ny rindrambaiko.
Mamorona ny doka ao amin'ny Google Slide;
Adikao / apetaho ny URL omena ao amin'ny Easy Multi Display;
EMD dia mampiseho ny slide-nao amin'ny fotoana tena izy;
Vaovao farany ny solosainao amin'ny solosainao na findainao.
Google Slides amin'ny Easy Multi Display
Asehoy ny pejiko
Azonao atao koa ny mampiseho ny pejin-tranonkalanao hanasongadinana ny fampiroboroboana anao!
Safidio ny URL an'ny tranokalanao;
Adikao / apetaho amin'ny Easy Multi Display ny URL;
Amboary ny fampisehoana tianao hananana;
Tranokala amin'ny Easy Multi Display
Asehoy ny sary sy horonan-tsary
Mamorona ny sary fampiroboroboana na horonan-tsary na mangataha serivisy famoronana izay hamorona sary ho anao. Azafady mba jereo ny lahatsoratray "Aiza no hahitana sary sy horonan-tsary tsy misy Royalty?"raha mila fanazavana fanampiny.
Miaraka amin'ny Easy Multi Display, ianao dia ho afaka hampiseho fisie iray na maromaro, jereo koa ny lahatsoratray "Afaka mampiseho horonan-tsary maromaro ve aho?"raha te hahalala bebe kokoa.
Medias amin'ny Easy Multi Display
Asehoy horonantsary YouTube
Azonao atao koa ny mampiseho horonantsary fampiroboroboana mivantana avy amin'ny YouTube na tranokala video an-tserasera hafa. Raha mila fanazavana fanampiny, vakio azafady ity lahatsoratra ity "Afaka mampiseho horonan-tsary maromaro ve aho?"Ary"Ahoana ny fomba hanehoana Youtube, Vimeo ary Dailymotion Video?"
Fandefasana horonantsary amin'ny Easy Multi Display
Raha liana amin'ny rindrambaiko Easy Multi Display izahay dia kitiho Eto hampidina ny kinova fitsapana maimaimpoana anay.
Fomba 3 hahatonga ny signage dizitaly tsy ho mankaleo kokoa
Ny foto-kevitra kafe Havana Savannah dia mamoaka takelaka nomerika Delphi Display
Webinar dia miresaka momba ny teknolojia mipoitra
Hafanàm-po an signage